SAUERKRAUT IYO DABOCASE AH EE GEORGIAN: CUNTADA DAQIIQDA AH - KAABASHKA
Sida loo kariyo kaabajka ah ee Georgian: oo ah sawir-qaadid talaabo tallaabo tallaabo leh
Waxaa jira cuntooyin badan oo laga helo salfiilaha, kuwaas oo caan ku ah waddamada kala duwan ee adduunka, iyo maaddooyinka qarsoodiga ah iyo waxyaabo qarsoon oo lagu kariyo saxankaan ayaa laga gudbayaa jiilka ilaa qarniga. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa mid ka mid ah cuntooyinka ugu wanaagsan ee suugada qoraxkraut ee Georgia, kuwaas oo sii kordhaya iyada oo ay diyaariyaan guriyeynta sida diyaarinta jiilaalka ama isticmaalka degdegga ah.
Ku saabsan dhadhanka kaabajka ee Guri
Kaabashka Georgian ee Georgia waxaa la yiraahdaa "Mzhave", kabiinka wuxuu ka kooban yahay dhowr waxyaabood, taas oo ay uga mahad celineyso suufka soo baxaya mid aad u dhadhan fiican leh. Waxaa la diyaariyey thanks to geeddi socodka dabiiciga ah ee Bisaylkiisa iyada oo aan ku darno khal, sidaas dhadhanka cuntada fudud yahay oo ka sii fiican.
Ma taqaanaa? Waxaa jira fursado kala duwan oo loo yaqaan 'sauerkraut', taas oo loo tixgelinayo cuntooyinka qaranka ee dalalka kala duwan. Tusaale ahaan, Jarmalka, dhirbaaxada waxaa loo isticmaalaa maalin kasta waxaana lagu daraa suxuunta kala duwan, Jarmalku waxay ku magacaabaan nooc saxan "Zauerkraut", iyo Kuuriya waxay diyaariyaan dhir samaynta, kaas oo loo yaqaan "kimchi".
Ku darida xididdo waxay siinaysaa saxanka midab casaan leh iyo dhadhan qurux badan oo macaan. Inta badan, jecel yihiin dhadhan iftiin leh oo dheeraad ah ayaa lagu daraa Kaabashka ee qaabka Georgian style basbaas kulul. Laakiin xitaa haddii aadan jeclayn cuntada basbaaska leh, waxaa lagu talinayaa in lagu daro toonta khudradda muhiimka ah, taas oo aan siin doonin kaliya dhadhan qaali ah oo basbaaska leh, laakiin sidoo kale xaji digtoonka. Celery iyo waxyaabaha kale ee dhirta ugu dambeyntii dhammeystiraya sawirka, isku dhafan, waxay abuurayaan bouquet of caraf udgoon oo wanaagsan. Kaliya cusbo ayaa lagu daraa saxanka, sonkorta ma aha mid ku jirta cunto karinta, sidaas darteed dhadhanka kaabashka waxaa badanaa lagu tilmaamaa sida cusbada, iyada oo aan macaan lahayn, laakiin weli, macaan ayaa weli u muuqda maaddooyin dheeraad ah.
Haddii farsamooyinka wax lagu kariyo ee saxda ah ee su'aasha la arkay, khudradda way yar tahay jilicsanaanta dibedda iyo qoyaanka gudaha.
Waxaanu kugula talineynaa inaad ka akhrido noocyada kaabajka iyo waxyaalahooda faa'iido leh: caddaan, casaan, gulugo, Peking, Savoy, broccoli, kohlrabi, romanesco, pak choi, kale, iyo dhererka.
Si aad u diyaargarowgareeysatid Giriigga, waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso qalabka soo socda:
mindi loogu talagalay maaddooyinka la isku qurxiyo;
guddi ka kooban maaddooyinka la jarayo;
miisaanka si loo cabbiro qadarka maaddooyinka dhadhanka ugu dheellitiran;
weel weel dabool leh oo ku ridaya maaddooyinka laga helo geedi socodka geedi socodka;
taarikada kaydinta dhexe ee khudaarta la jarjaray;
taarikada, si ay u cadaadiyaan waxyaabaha ku jira weelka ku jira habka marinating.
Waa muhiim! Si loo fududeeyo oo loo dedejiyo geedi socodka maaddooyinka kala-saaridda, waxaad isticmaali kartaa qalabka wax lagu karsado oo leh jajabyo ku haboon.
Si aad u diyaariso saxan dhadhan fiican leh, waa inaad kaydisaa:
kaabajka cad ee xaddiga 1 kg;
xididdo - 400 g;
toon - 60 g;
caleemaha celery - 50 g;
basbaas kulul - 1 xabbo (yaryar);
Sidoo kale akhri hababkii kaabajka goosashada: caddaan, casaan, jeexan, broccoli; sida ugu dhakhsaha badan halsano iyo qaadashada kaabajka.
Aan u fiirsano si faahfaahsan marxaladaha kala duwan ee karinta nafaqada ee Georgian:
Si aad u bilowdo diyaarinta buuxinta. Si arrintan loo sameeyo, biyo ku shub digsi kadibna cusbo ku dar si waafaqsan cuntooyinka. Si tartiib ah u diyaarso oo ku sii daa dabka cuntada si ay milixdu u dhammaato oo dheriga dhoobo.
Dhanka kale, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo diyaarinta maaddooyinka aasaasiga ah. First of dhan, ka fiirso Kaabashka. Madaxiisu waa la dhaqay, la qalajiyey tuwaal waraaq ah si looga takhaluso qoyaanka xad-dhaafka ah.
Marka xigta, gooyo madaxa qeybta yar, ka saar jaranjarada jaranjarada dhexdhexaad ah 7 illaa 7 cm Si aad uhesho warqadaha aan ku dhicin, laakiin ugu yaraan si wadajir ah u wada qabso, waxaa lagu talinayaa in la gooyo kala badhka madaxa "jeexa" ka soo leexashada dhinac dhinaceeda dhinaca dhexe ee dhinaca danbe. Kadibna mid waliba "mindhicirka" wuxuu u qaybsan yahay mindi saddex qaybood.
Ka dib markii khudradda ugu muhiimsan la gooyo, waa inaad bilowdaa inaad diyaariso xididdo. Waa mid hore loo diiray, oo si fiican loo dhaqay oo jarjar gooyay (1-2 mm qaro) oo leh mindi ama la isku daro haddii ay jirto mishiinka lagama maarmaanka ah.
Marka xigta waxaad u baahan tahay in aad jarjartid caleemaha celceliska oo si wanaagsan loo dhaqay. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo ballaaran, sidaas darteed ka dib markii saxan diyaar u ah, celery waxaa si fudud looga saari karaa cuntada dhammaatay.
Basbaas kulul ayaa la jarjarey siddooyin yar yar, si markaa kadibna waxaa si dhakhso ah looga saari karaa saxanka waqti kasta.
Garlic waa in la diiriyo oo la googooyaa qaybo yaryar, xaleef yaryar oo gooyaa kala badh, weyn - 4 gogo '.
Marka dhammaan maadooyinka la diyaariyo, waxaad bilaabi kartaa khudradda khudaarta, halkaa oo laga dhoofin doono. Tani waa suurtagal in la isticmaalo baaldi yar oo caag ah oo dabool leh ama weel caag ah oo ku habboon mugga.
Qeybta hoose ee daboolka daboolka daboolka ah ee looxa soo saaro lakabka keliya. Si taxadar leh, si aan u jebin sharafnimada ee qaybaha, khudradda ugu muhiimsan ayaa sidoo kale lagu dhajiyay hal lakab. Next, gelin on Kaabashka a toon yar, basbaas kulul iyo celery. Sii wadista in lakabyada lakabiyo ayaa sidoo kale lagama maarmaan ah illaa inta ay ka baxayaan maaddooyinka. Lakab ugu dambeysa waa inay noqdaan xididdo, waxay u oggolaan doontaa lakab midabka wanaagsan ee kaabajka, kaas oo hoos ku yaal.
On top of khudaarta ku shub karkaraya ku shub. Ha ku degdegin, isku day inaad hubiso in dhammaan khudradda la kariyo isku dar ah.
Marka xigta, saxanka dusha sare saar si aad u yar cadaadis ah khudaarta, iyo ku shubid buuxda iyaga.
Ka dib markaa, saxan qoto dheer ayaa lagu rakibay daboolka sare si uu marka hoose ee hoose uu taabto daboolka baaldi on khudaarta, waxaa jira cadaadis yar oo joogto ah. Daboolka laguma talineynin in uu si buuxda u xiro, hal dhinac, ka tago ajar, si ay khudaarta u helaan hawada. Kaliya kiiskan, habka Bisaylkiisa ayaa si sax ah u dhici doona.
Xaaladdan, ka samee weelka 4 cisho, inta lagu jiro xilligaas khudaarta ay gebi ahaanba diyaar u tahay isticmaalka.
Waa muhiim! Haddii aad rabto inaad dardargeliso geedi-socodka kaabajka ah ee Georgian, ku dar 30 ml oo ah 9% khaldi inta lagu jiro karinta. Sidaas darteed, Kaabashka waxaa la cuni karaa 2 maalmood ka dib.
Kaabashka Georgian waa cunto fudud oo aad u fiican oo kulaalaya burooyinkoodii dhadhanka waxayna ku darsamayaan cunto yaryar. Cuntadan waxaa loo adeegsan karaa miiska si gooni gooni ah, oo horay loo waraabiyey saliid iyo rusheeyey xawaashka si ay u dhadhamaan. Cunto wanaagsan isku darka cuntooyinka hilibka. Georgia gudaheeda, cuntadani badanaaba waxay ku dhacdaa kobcin. Khudaarta cagaaran ayaa sidoo kale ay ku xiran yihiin cuntooyinka kalluunka iyo khudradda. Lovers of pickles waxay cuni karaan khudaarta kuwan oo kale, iyada oo aan lahayn wax saxarro dheeraad ah. Marka la eego dhadhanka ugu wanaagsan ee kaabajka ah ee Georgian, badanaa qayb ka mid ah betaalku waa la cunaa isla markiiba ka dib karinta.
Baro sida loo kariyo yaanyada (cagaarka), qajaarka, boqoshaada, boqoshaada, roodhida, iyo diyaarinta xididada (baraf, qalajin), malayga oo leh xididdo.
Ka dib marka cuntada qabowgu diyaar u yahay isticmaalka, waxaa lagama maarmaan ah in loo wareejiyo weel fudud, kaas oo si adag loogu xiri karo dabool. Waxaad ku kaydin kartaa khudaarta la kariyay ee qaboojiyaha ama maqaasiinka 2-3 bilood. Heerkulka kaydinta waa inuusan ka badneyn ilaa heerkul ilaa heerkulka. Waqti ka dib, kaabashku wuxuu noqdaa mid la gashado dhadhanka iyo dhadhanka maaddooyinka kale ee dheeraadka ah iyo xitaa noqotaa mid adag.
Inta lagu jiro kaydinta, khudaarta way noqdaan kuwo jilicsan, sidaas darteed haddii aad doorbido cunto fudud, qashqashaad ku darso 3-4 toddobaad.
Ma taqaanaa? Cunnooyinka qubeyska Ruushka ee Ruushku wuxuu ka kooban yahay qayb qarsoodi ah - madax-furan. Berry Tani ma aha oo kaliya siinayaa murugo gaar ah saxan dhamaystiran, laakiin sidoo kale ka qaybqaato kaydinta dheeraadka ah ee khudradda cagaaran sababta oo ah content sare ee benzoic acid - dabiici ah dabiici ah.
Video: Cuntada kaabajka ah ee Georgian
Varyts of karinta kaabajka leh xididdo
Wax walba waa mid aad u fudud - qiyaas 3-litir ah waxaad u baahan tahay 1.5 kg oo ah kaabajka, 1 dabocase yaryar, 1 karootada waaweyn. Khudaarta Peel iyo karootada la gooyey iyo xididdo ku dhejisey garaac yar oo khafiif ah. Kaabashka la jarjarey. Isku dar khudradda oo ku buuxi weel siib ah, ku dar 5 dhir ee allspice. Ku shub weel 4st.l. sonkorta iyo 3 tbsp. cusbo, ku shub 200-250g oo ah 9% oo khal iyo 2 litir oo biyo ah karkaraya, dabool leh daboolka kabadhada. Maalinta joogta. Maalin ka dib, kaabash diyaar u yahay, ku hay qaboojiyaha, laakiin aan ka badnayn 1 asbuuc. marka loo adeego, ku shub kaabajka. saliid
Khudaarta cagaaran waxay marwalba joogtaa, sababtoo ah waxay aad u faa'iidaystaan ​​jirka! Sidaa darteed, kaniiniyada loo yaqaan 'sauerkraut jecel'. 1 litir oo biyo ah karkaraya - 2 qaado oo milix ah. Qeybta hoose ee saddex-litir ah dhigo kaniiniyada kaabajka, oo ku dhajinta xididdo la jarjarayey iyo karootada, 2-3 xabo oo toon ah. Si adag u jiifso. Shub 0.5 koob oo saliidda cuntada, 1 koob oo sonkor ah, 1 koob oo ah khal. 9%, brine la qaboojiyey. (Waxaan isku dayay inaan soo gaabsho geedo yar yar, 0.5 koob, laakiin markaa dhadhanka ayaa u muuqda inuu yahay laalaabka iyo geeddi-socodka caleemaha ayaa hoos udhacay). Sida caadiga ah maalinta saddexaad mucjiso waa diyaar. Isku day! Ka dib oo dhan, heerka diyaargarowga waxay ku xiran tahay heerkulka qolka. Brine wuxuu noqonayaa casaan. Xoojinta waxay ku xirnaan doontaa qiyaasta beetroot. Kiniinnada hareeraha ku wareegsan ayaa sidoo kale lagu buuxiyaa casaan. Laakiin saxanka this ma aha oo kaliya quruxsan, laakiin weli aad u dhadhan fiican leh. Oo ciduna ma ay tudhin cid nin ah.
Sidaas darteed, karinta kaabajka Georgian at guriga ma noqon doonto mid adag. Si aad u sameyso saxanka dhadhanka ah iyo udgoon, waxaad u baahan tahay inaad ixtiraamto kala duwanaanta maaddooyinka oo aad raacdo tilmaamaha lagu karsado.